ပလပ်စတစ်မှိုထုတ်လုပ်သူ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း preform မှို, PVC ပိုက်လျောက်ပတ်မှို - Zanbond Group မှ
သေတ္တာပြီးတော့ Pallet မှိုစီးရီး
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Preform & Cap, Bottle သမှိုစီးရီး
စက်ရုံ Show ကို
သန့်စင်သောရေ Bottle သများအတွက် 24 ခေါင်းပေါက် 19g Bottle သ Preform မှို
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: Preform မှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်: အဆင်သင့်မှို core နဲ့လိုင်ပစ္စည်း preform: S136 မှို preform: ...
Hot Runner မှိုနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Preform မှို
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုပ်ပိုးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး: ISO9001: 2008 Categories: ကွန်တိန်နာထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်း ...
ပလပ်စတစ် Injection ကို PP စားနပ်ရိက္ခာထူးအိမ်သင်အမှတ်တရကွန်တိန်နာမှို
quick အသေးစိတ်မော်ဒယ်အရေအတွက်: Custom Shape Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: အိမ်ထောင်စုကုန်ပစ္စည်းမှိုပစ္စည်း: P20 / 718 / 738 / NAK80 / S136 ကုန်ပစ္စည်း ...
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သတ္တုကုန်ပစ္စည်း: ယာဉ်မှိုမှို Life: 500k 1000k ရိုက်ချက်များ Surface ကမှ ...
ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပုံလောင်းအိန္ဒိယစျေး / ပလပ်စတစ်သဘာပတိ Injection ကိုမှိုစက်ဥက္ကဋ္ဌ
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်မှိုအမည်: ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်မှိုလိုင်: 1 ...
အိမ်သာအဖုံးမှိုစျေးပေါတဲ့ Injection ကိုမှို
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းကိရိယာအမည်: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းအမည် Make: ...
သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကစျေးနှုန်းစာရင်း, ဗီဒီယိုများ, ပုံများစသည်တို့ကိုသည်ဆက်သွယ်ရန်, ကြှနျုပျတို့ကိုကိုသိပါစို့ပေးပါ။ ကျနော်တို့ 12 နာရီအတွင်းမှာပဲသင်က Reply လိမ့်မည်!
Zanbond အုပ်စု, ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထူးပြု, ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများထဲမှထိုကဲ့သို့သောကုန်စည်မှို, အိမ်ထောင်စုကရိယာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း preform မှို, ကစားစရာမှိုနှင့် PVC ပိုက်လျောက်ပတ်မှိုအဖြစ်ပလပ်စတစ်မှိုဖြစ်ပါသည် နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး Ningbo ၌တည်ရှိ၏။ ရှန်ဟိုင်း & ဟန်ကျိုးနီးစပ်သူဖြစ်သောတရုတ် Zhejiang ပြည်နယ်, ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများ၏ထုတ်လုပ်မှုမြို့ဖြစ်သည့် Huangyan အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
750g 18.9L5ဂါလံအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် preform
1) 100% အသစ်သောပစ္စည်း 2) မြင့်မားသောင့်လင်းမြင်သာ 3) မြင့်မားခိုင်မာခြင်း 4) အမျိုးမျိုးလည်ပင်းအရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည်များလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအလေးချိန် (ညီ) 5) ကြှနျုပျတို့သစ်ကိုမှိုမဖွင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိမှိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်ဖောက်သည်အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအတွက် preforms ထုတ်လုပ်နိုင်သည် Features6) ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အနီ, (အပြာကို ရွေးချယ်. နိုင်ပါတယ် ...
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ထုပ်မှိုကုန်ပစ္စည်းအမည်: ပုလင်းဦးထုပ်မှိုဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကို: CAD မှိုဘဝကို: 250000-300000shots Surface ကကုသမှု: ပိုလန် Runner: Hot Runner \_ အေး Runner ပစ္စည်း: OEM ODE ပလတ်စတစ် Injection မှိုအားသာချက်များ 1 ။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း2။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ခံမှု3။ ငွေရတတ်သောသူနှင့်အတူ ...
28mm လည်ပင်းပေ Preform မှို, Preform များအတွက် Injection ကိုမှို, သတ္တုရေ Preform မှိုပုလင်းသွပ်
quick အသေးစိတ်ပုံဖော် Mode ကို: Preform မှိုကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိကုန်ပစ္စည်း: ပေမှိုပစ္စည်း preform: S136 မှိုဘဝကို: သန်း5ကျော်ကြိမ်မှို 1 features Preform ။ မှိုပြား Pre-hardening process.Core နှင့်အတူ P20 သံမဏိဖြစ်ကြသည်လိုင်နှင့်လည်ပင်းဝက်အူထက် သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့ Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးသံမဏိ, S136 မြင့်သောအစွမ်းသတ္တိ၏ထားကြပါတယ် ...
ရေ Bottle သ Cap Injection ကိုပလတ်စတစ်မှို
စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်နှင့်အိမ်ရာစာလုံးကြီးဘို့ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို / မှို
Zanbond ပိုင်ဆိုင်မှု (Zhejiang) co ။ , ltd
ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ကုန်စည်မှို, အိမ်ထောင်စုကရိယာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း preform မှို, ကစားစရာမှိုနှင့် PVC ပိုက်လျောက်ပတ်မှိုနှင့်အဖြစ် Professional ကပလပ်စတစ်မှိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း,
No.456, Tai'an အလယျပိုငျးလမ်း, Yinzhou, Ningbo ။ တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင်ခွင့်© Zanbond Holdings က (Zhejiang) Co. , Ltd မှ